Famonoana otrikaina, mamafa, vokatra ara-nofo ho an'ny olon-dehibe - Haicheng
Tongasoa eto Haicheng
Miarahaba anao ny vokatra Yantai Haicheng Sanitary!
Yantai Haicheng Sanitary vokatra Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Yantai, faritanin'i Shandong, Sina, tanàna amoron-dranomasina tsara tarehy misy toe-javatra ara-jeografika ambony sy fitaterana mety. Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famonoana otrikaretina sy famokarana vokatra madio. Taorian'ny fampandrosoana 17 taona, dia nanjary isan-karazany ny otrikaretina sy ny antimicrobial agents, ny vokatra ho an'ny olon-dehibe, ny famonoana otrikaretina sy ny lamba famaohana taratasy ary ireo andiana mpamokatra vokatra hafa, fa koa ireo mpamatsy fitaovana ara-pitsaboana sy mpamatsy fitaovana matihanina. manana atrikasa fanadiovana GMP 100000 kilasy sy fitaovana famokarana mandeha ho azy izahay. Izy io koa dia manana fahazoan-dàlana hamokatra, lisansa fandraharahana ary fanamarinana fanamarinana tanteraka ny vokatra isan-karazany. Afaka manome OEM sy ODM izahay, ho an'ireo mpividy manerantany hiasa hiatrehana ny filan'ny olona eran'izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra amin'ny vokatra ara-pahasalamana amin'ny fiainany andavanandro.
Fa maninona no mifidy ny HaiCheng?
Orinasa fito ambin'ny folo taona
Japon 、 Hong Kong 、 Azia atsimo atsinanana sns
Valiny ara-potoana aorian'ny varotra